လှကျော်ဇော ● ကျွန်မဆက်၍ရေးချင်သော ဖေဖေ့အကြောင်းများ- ဆောင်းပါးအမှတ် (၄၆) – MoeMaKa Burmese News & Media
ဖေဖေရှိစဉ်က သူ့စာအုပ်စင်ကိုထိတာမကြိုက်လို့၊ ခပ်ဝေးဝေးကပဲ ရှောင်နေရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းအထူးသဖြင့် သူ့ကိုယ်တိုင် ရေးအတ္ထုပွတ္တိရေးလာတော့ သူကိုယ်တိုင်က ကျွန်မကို သူ့စာအုပ်စင်ကဖိုင်တွေကိုယူခိုင်းတာ၊ ရှာခိုင်းတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ သူကမှတ်စုတွေ၊ ဒိုင်ယာရီတွေလည်း အမြဲမပြတ်ရေးတတ်ပြီး ဒါတွေကိုလည်း စနစ်တကျစုဆောင်းထားပါတယ်။ စာတွေရေးရင်လည်းမိတ္တူတွေ သိမ်းထားတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေအကူအညီနဲ့ သူ့စာအုပ်ကိုရေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ (ထို့အတူ အခု ကျွန်မရေးနေတဲ့ “ကျွန်မဆက်၍ရေးချင်သော ဖေဖေ့အကြောင်းများ” ဆောင်းပါးများကိုလည်း အဲဒီဖေဖေစုဆောင်းပေးခဲ့တဲ့အချက်လက်များအပေါ်အခြေခံပြီးရေးနိုင်နေတာပါ။ ဖေဖေက ကျွန်မကို မကုန်ခန်းနိုင်တဲ့ သမိုင်းအမွေအနှစ်တွေပေးခဲ့တာပါ။)
ဒီတော့မှ ကျွန်မက ဖေဖေ့ဖိုင်တွဲသတိရပြီး ပြန်ရှာရပါတယ်။ ဖိုင်တွဲထဲမှာပါတာတွေကတော့ ….
နောက်မှတ်မိတာတခုကတော့-အန်ကယ်ချစ်မြိုင်ရဲ့ အင်တာဗျူး စီဒီအခွေတခွေလည်းရထားဖူးပါတယ်။ အဲဒါတော့ ရှာမ တွေ့သေးပါ။ (လက်ဝယ်ရှိသူများ မျှဝေပေးနိုင်ရင် ပေးစေလိုပါတယ်။) အဲဒါတွေရယ်၊ ဖေဖေ့စာအုပ်ထဲက အန်ကယ်ချစ်မြိုင် အကြောင်းရေးထားတွေပါ စုပေါင်းပြီး ဖေဖေနဲ့အန်ကယ်ချစ်မြိုင်အကြားဆက်ဆံရေး (၁၉၄၆ – ၂ဝဝဝခုနှစ်လွန်များအထိ-နှစ် (၅ဝ) ကျော်) အကြောင်း ရေးပါဦးမယ်။
၂ဝဝဝ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၈) ရက်နေ့စွဲနဲ့ အန်ကယ်ရဲ့စာထဲမှာ ….
ဖေဖေရဲ့အသက် (၉ဝ) ပြည့်် (၂ဝဝ၉ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်) နေ့ကထုတ်ခဲ့တဲ့အမှာစာမှာ …
ဖေဖေက ဗိုလ်မှူးကြီးချစ်မြိုင်ထံရေးတဲ့စာ (၁၁-၄-၉၈ နေ့စွဲနဲ့) မှာ ရေးထားတာတွေကတော့ …
အန်ကယ်ရဲ့ ဘာမားဒီဘိတ်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောပြထားတာတွေကတော့ …
(၁၉၅၅) ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် တပ်မတော်မှအရာရှိများကို အစိုးရက ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးသည်။ တိုင်း မှူးဗိုလ်မှူးချုပ်များကို “သရေစည်သူဘွဲ့”၊ ဗိုလ်မှူးကြီးများကို “စည်သူဘွဲ့” စသဖြင့်ပေးအပ်ခဲ့ရာ ကျွန်တော့်ကိုလည်း “သ ရေစည်သူဘွဲ့” ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုဘွဲ့တံဆိပ်များမှာ ရွှေများနှင့်လုပ်ထားသဖြင့် “စည်သူဘွဲ့” ရသောဗိုလ်မှူးကြီးချစ်မြိုင်က “အရေးအကြောင်းရှိလို့၊ လိုလာရင် အဲဒီရွှေတွေ ရောင်းစားကြတာပေါ့ဗျာ” ဟု နောက်ပြောင်ခဲ့ဖူးတာကို သတိရမိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ဖေဖေသူ့စာအုပ်ထဲထည့်ရေးခဲ့တဲ့ အန်ကယ်ချစ်မြိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ။ (ဗိုလ်မှူးချုပ် ဟောင်းကျော်ဇော – ဆိုင်းစုမှသည် မန်ဟိုင်းဆီသို့ – ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပွတ္တိပေါင်းချုပ်- ယဉ်မျိုးစာပေ- နှာ၂၄ဝ-၂၄၁)
၁၉၉၇ ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံခံရမှု အနှစ် (၅ဝ) ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် “တရားခံအစစ်ဘယ်သူလဲ” ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ဖေဖေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေကို ဘီဘီစီက အသံလွှင့်အပြီးမှာတော့ အန်ကယ်က ကျွန်မတို့အိမ်ဖုန်းနံပါတ် ရသွားပါတယ်။ ဘီဘီစီက ကျွန်မတို့ကိုခွင့်တောင်းပြီးနောက် ပေးလိုက်တာပါ။
“တပ်မတော်ဟာ ရယူလိုမှုအနည်းဆုံးနဲ့ ပေးဆပ်နိုင်မှုအမြင့်မားဆုံးအဖွဲ့အစည်းတရပ်ဖြစ်တယ်” တဲ့။ ကာချုပ်ကြီးအနေနဲ့ “အတိတ်မေ့ရောဂါ” ရလို့များ ဒီလိုပြောထွက်လေသလားလို့ ထင်စရာပါ။
ဗမာပြည်သူများကတော့ သူတို့လျှောက်ရမယ့်လမ်းကို ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောလာ ရေးအတွက် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြမှာပါ။ အောင်ပွဲလည်း မုချရမှာပါ။ မြန်မြန်ရပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက် …။
၃။ ဓာတ်ပုံမှာ ၁၉၄၆ – ၄၇ ကာလ၊ သံလျင်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ သေနတ်ကိုင် ခြေလျင်တပ်ရင်း (၃) ဖြစ်ဟန်ရှိပါတယ်။ ရှေ့တန်းအလယ်တည့်တည့်ဖေဖေဖြစ်ပြီး ညာဖက်က ဗိုလ်မှူးကြီးချစ်မြိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
← ဇာဂနာ – မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုတဲ့ ဧည့်သည် … အိုဘားမားနဲ့
ဧရာ(မန္တလေး) – အတော်ဆုံးကလေးတွေ ဆိုသတဲ့လား →
One thought on “လှကျော်ဇော ● ကျွန်မဆက်၍ရေးချင်သော ဖေဖေ့အကြောင်းများ- ဆောင်းပါးအမှတ် (၄၆)”
လေးစားစရာ စံနမူနာပုဂ္ဂိုလ် စစ်သားကြီးများပါ။